YAABKA ADDUUNKA: Lamaane 14-sano is qabay oo Messi iyo Ronaldo dartood isku furay!!! – Gool FM
YAABKA ADDUUNKA: Lamaane 14-sano is qabay oo Messi iyo Ronaldo dartood isku furay!!!
Byare July 12, 2018
(Europe) 12 Luulyo 2018. Waa mid ka mid ah dhacdooyinka ugu yaabka badan kubbada cagta adduunka. Lamaane muddo is qabay ayaa Messi iyo Ronaldo dartood u kala tagay.
Nin u dhashay dalka Ruushka ayaa furay xaaskiisa ay wada joogeen 14-sano kaddib markii ay si xun u dhaleeceysay bandhigii Lionel Messi ee Koobka Adduunka.
Arsen 40-jir iyo Lyudmila 37-jir ayaa isku biiriyay jaceylkooda kubbada cagta markii ay ku kulmeen Maqaaxi isboorti oo ku taala Chelyabinsk ee dalka Ruushka intii lagu guda jiray koobkii adduunka ee 2002.
Way is guursadeen wax ka yar labo sano kaddib inkastoo dhab ahaantii ay kala tageerayeen labo koox oo si waali ah u xifaaltanta Barcelona iyo Real Madrid.
Jaceylka waalan uu Arsen u qabo xiddiga reer Argentina ee Lionel Messi iyo xaaskiisa oo door bideysa Ronaldo ayaa usbuucii tagay soo afjartay 14-sano ay wada joogeen, afi.ru ayaa sidaa wariyay.
“Bilowgii Koobka Adduunka, Lyudmila waxay si joogta ah ugu jees jeeseysay aniga iyo ciyaaryahanka aan Jeclahay iyadoo leh inuu si liidata u ciyaaray isla markaana uusan xitaa dhalin Karin rigoore muhiim ah kulankii Iceland,” Sidaa ayuu u sheegay Jariiradda.
“Markii ay markale bilowday inay si aan sax ahayn uga hadasho Messi iyo bandhigiisa, waan carooday, waxaana anigana u muujiyay wax kasta aan ka aaminsanaa quruxlowgeeda Ronado, xulka qaranka Portugal, nafsadeed iyo kooxaha kale ay Lyudmila ku waalan tahay.
“Intaa kaddib alaabteyda oo dhan ayaan qaatay waana ka tagay. “.
Maalinkii xigay warqada furiinka ayuu u soo gudbiyay.
Messi iyo Ronaldo oo uu reerkaa dartooda u bur buray ayaan meelna ka gaarin Koobka Adduunka isla markaana ka soo wada haray, waxayna u badan tahay in sanadkaan laga qaadi doono abaal marinta Balon d’Or oo ay 10 sano xoog ku heysteen.
Fabregas oo ku kacay qalad wayn kadib markii uu Chelsea kala hormaray Cayrinta Antonio Conte!
Riyad Mahrez oo ka warbixiyay riyada iyo ujeedka uu u yimid kooxda Manchester City